कमलेश- जो पालघरका अस्पतालको लुटधन्दा भण्डाफोर गर्न लागि परेका छन्! « Media for all across the globe
कमलेश- जो पालघरका अस्पतालको लुटधन्दा भण्डाफोर गर्न लागि परेका छन्!
वसई । प्रवासी नेपालीहरुको सुख, दुःखमा खटिने कमलेश सिंह मुम्बईमा बसोबास गर्ने प्रवासी नेपाली र वसई, बिरार क्षेत्र, पालघर जिल्लाका स्थानीयहरुका लागि नौलो नाम होइन। युवा उमेरदेखि नै सामाजिक काममा सक्रिय कमलेश पछिल्लो समय विद्यार्थी राजनीतिमा समेत अग्रसर बनेका छन्।
कमलेश महाराष्ट्र राज्य सरकारका शिक्षा, जलसम्पदा, कामगार तथा महिला बालकल्याण मन्त्री श्रीबच्चू कडू र प्रहार जनशक्ति पक्ष पालघर जिल्ला अध्यक्ष श्रीहितेश जाधव निकट समेत हुन्।
महाराष्ट्र राज्यको पालघर जिल्लामा विद्यार्थी राजनीतिमार्फत उनी चर्चामा समेत रहेका छन्। प्रहार जनशक्ति पक्ष विद्यार्थी संगठन पालघर जिल्लामा कमलेश नै विद्यार्थी मोर्चाको नेतृत्व गर्छन्।
कोरोना महामारीले सबैलाई आर्थिक संकटमा पु¥याएको छ। यो सन्दर्भमा बिरामीहरुको समेत उच्च चाप देखिन्छ। कतिपय अस्पतालहरुले भर्ना गर्न मान्दैनन् त – कतै अस्पतालको बिल बढी आउँने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा युवा नेता कमलेश नै नेपालीहरुका लागि काम लाग्ने गरेका छन्।
“कोभिड-१९ को समयमा अस्पतालको बिल बढी लिइरहेका छन्। लुटमार गरिहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कतै कोभिडबाट बिरामी हुनुहुन्छ। अस्पताल धेरै दिन बस्दा बिल बढी आएको छ, डिस्काउन्ट गर्नुप¥यो। भन्नुहोस् सहयोग गर्न तयार छु”- कमलेशले भने।
कमलेशले कोरोना महामारीको सुरुवाती दिनहरुमा समेत धेरै प्रवासी नेपालीहरुलाई सहयोग गरेका छन्। बन्दाबन्दी जारी रहेका बेला खाद्यान्नमा समस्या हुँदा पालघर आसपास बस्ने थ्रुपै नेपालीहरुको घर–घरमा राज्य सरकारमार्फत खाद्यान्न सामाग्री पठाउँन उनले समन्बय पनि गरेका थिए।
खासगरी उनले पालघर जिल्लामा बसोबास गर्ने प्रवासी नेपालीहरुको दुःख र अप्ठेरो समयमा सहयोगका लागि तत्कालै खट्ने गरेको मुम्बई निवासी अधिकारकर्मी तथा लेखक प्रवीण सिंह बताउँछन्।
प्रहार जनशक्ति पक्ष विद्यार्थी संगठन पालघर जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका कमलेश यस क्षेत्रमा रहेका भारतीय वा नेपालीमूलका विद्यार्थीहरुको हक, अधिकार र गुणस्तरिय शिक्षाका लागि संषर्घरत छन्। उनले शिक्षासँगै पालघर, वसई, बिरार लगायत इलाकाको विकास र समाजसेवामा समेत अग्रपक्तिमा भुमिका निवार्ह गरेका छन्।
प्रहार जनशक्ति पक्ष पालघर जिल्ला अध्यक्ष श्रीहितेश जाधव
कमलेश सिंह प्रहार जनशक्ति पक्ष विद्यार्थी संगठन पालघर जिल्ला अध्यक्ष